ကိုင် အမေစု ရေ ဘီလိုလုပ်မှာတုန် | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » ကိုင် အမေစု ရေ ဘီလိုလုပ်မှာတုန်	5
Posted by က်ိုကိုအိုဗာ on Jul 6, 2012 in Copy/Paste |5comments
View all posts by က်ိုကိုအိုဗာ →	Blog
etone says: အမေစုကတော့ ဘယ်လိုမှ လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ သူ့ရဲ့ အစီစဉ်တိုင်း သူဆက်သွားမှာပါပဲ ။
အပင်မြင့်လေ ၊ လေတိုက်လေဆိုတာ သဘာဝပါ ။ ဒီလို မဟုတ်က ဟုတ်က မှိုင်းတိုက်နေတဲ့ စာမျိုးကြောင့် သူမအရည်ချင်းတွေ ဆုတ်ယုတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလေ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9955
မောင်ပေ says: ရခိုင်ကိစ္စ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အရေးဆိုတာ အမေစု တစ်ယောက်ထဲတင် တာဝန်လာလွှဲနေသလိုပါလား
Wow says: နောက်တစ်ခါ လာပြန်ချီသေး… ဟေ… ဟေ…. ၀ါး…
အကွက်ရွေ့တာတွေက ရိုးလွန်းအားကြီးလို့ တစ်မျိုးပြောင်းရွေ့ကြည့်ပါလား….
၀မ်းတွင်းရူး says: ငြိမ်းချမ်းဖို့ သာ အဓိကပါဗျာ။
ခေါင်းစဉ်က ကိုင်ဆိုလို့ ဘာများ
burma wantharnu says: က်ိုကိုအိုဗာရေ ကိုဝင်းကို ဆိုသူက စုန်းပြူးတွေ သတ်တယ် အာမချောင်နဲ့နော်။